Imifanekiso yokuqala esemthethweni yePixel 3 sele ikhutshwe | Androidsis
Kwiiveki ezintathu iGoogle Pixel 3 iya kuziswa ngokusemthethweni. Umsitho oza kubanjwa eMelika naseYurophu, kule meko eParis, nge-Okthobha ye-9. Inkampani ifuna ukuba nobukho obungcono kwezi modeli kwilizwekazi laseYurophu, kuba ukusasazwa akuzange kube yeyona nto ibalaseleyo kwizizukulwana ezidlulileyo. Esi sizukulwana sibonakaliswa kukuvuza okuninzi.
Into ephinde yenzeka kwakhona ngoku, okoko umfanekiso wokuqala osemthethweni wale Google Pixel 3. Yiloo nto ke uyilo lweefowuni ezintsha zefemu yaseMelika luqinisekisiwe. Akukho nto yothusayo kule nkalo.
Kuba uyilo lweemodeli zombini luqinisekisiwe, ebesizibonile kwezi veki zidlulileyo. Kodwa ubuncinci inika uxolo lwengqondo kwaye kufuneka incede ekupheliseni amanye amarhe athe avela malunga neefowuni ezimbini ezintsha ezivela kwifemu.
Njengoko kuchaziwe kwezi veki, I-Pixel 3 XL iya kusebenzisa inotshi kwiscreen sakho. Inotshi yobungakanani obuphawulekayo, eyona nto ibalulekileyo kuyo. Iinkcukacha ezingaqinisekisi abasebenzisi abaninzi, kunye nokumangalisa emva kokugculelwa kukaGoogle nge-notch ye-iPhone X kunyaka ophelileyo.
Uyilo lwePixel 3 luyafana ngakumbi kwiimodeli zonyaka ophelileyo. Ukubheja kwiscreen esinezakhelo ezincinci, kwaye ngaphandle kwenotshi, ukukhulula uninzi. Kanye nokuba mncinci ngokubonakalayo kunenye ifowuni. Ezi fowuni zimbini zinekhamera enye ngasemva, ekulindeleke ukuba yenze uphuculo olubonakalayo.
Akuzange ngaphambili sibe nokuvuza okuninzi malunga neefowuni ngaphambi kokumiliselwa. Kodwa inyani kukuba sazi okuninzi ngale Pixel 3 intsha, ngakumbi ngemodeli yeXL, eyeyona iye yafumana eyona ndawo ivuza kakhulu ukuza kuthi ga ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ukucoca imifanekiso yokuqala esemthethweni yeGoogle Pixel 3